Obere induction ngwa agha-eji aka n’etinye ngwa ngbanye oku ngbanye
Home / Ngwá Ọrụ Na-eme Ngwá Ọrụ / mini ductor itinye n'ọkwa okpomọkụ / Obere igwe na-ekpo ọkụ
Categories: Ngwá Ọrụ Na-eme Ngwá Ọrụ, Ịgba Ọkụ Na-agba Ọkụ, Igwe ọkụ kpo oku dị n'ime ya, mini ductor itinye n'ọkwa okpomọkụ Tags: aka induction hita, HLQ igwe eji abanye ọkụ, itinye n'ọkwa okpomọkụ, mmebe igwe oku, emeputa ihe na emeputa igwe oku, nnabata onye na-eweta oku, mini itinye ọkụ okpomọkụ, igwe eji abanye igwe, igwe eji ebu okpukpu, obere ọkụ ọkụ induction
Obere ngwa inductor ihe eji eme oku - obere ngwa eji emetu oku nke a na - eji magnetik Inductor weputara mkpuru osisi gbara okpueze, kpochie na ngwa ngwa, ugboala, ugbo, idozi ugbo ala.
Obere igwe eji eji igwe na - enye aka n’etinye igwe na - enye ihe n ’Magnetic Inductor. KIA-1000W na-eji magnetik itinye n'ọkwa kpo oku teknụzụ iji kpoo obere akụkụ ya n’ụgbọ, igwe, akụkụ igwe dị iche iche na nke polyethylene. A na-ejikarị okpomoku dị iche iche na - eme ka ihe ọkụ ọkụ na - acha ọkụ, mkpụrụ, gears, Pulleys, pulleys, bearings, sensọ, wdg Enweghị ọkụ na-emeghe, ọ dịghị mkpa izere ihe dị iche iche na-enwu ọkụ dịka plastik; enweghị mmiri jụrụ oyi, ọrụ nchekwa adịghị mma, ojiji dị mfe ma dị mfe iburu.
Igwe ọkụ dị mma, dị mfe iji n'èzí na n'ime. Enweghị ọkụ, nchekwa nchekwa nke ihe ndị ọzọ, melite arụmọrụ ọrụ. Ọ naghị emebi akụkụ dị nso na kpo oku. Ọ gaghị emerụ akụkụ ndị gbara ya gburugburu site na rọba ma ọ bụ rọba. Enweghị ọkụ na-emeghe. Ciplekpụrụ: Ojiji nke iji igwe na igwe anaghị agba n ’ikuku eletriki nwere ike gbanwee ihe mkpuchi ka ọ bụrụ uhie ntinye ngwa ikpo oku n’ime sekọnd iri abụọ. Enweghị ọkụ na-emeghe emeghe iji hụ na nchekwa nke arụmọrụ gị. A na-ejikwa rọba na ihe ndị ọzọ na-esochi anya site na ngwa ihe ahụ. Mbara eji: mkpochapu nke ụlọ elu ike, ịwepu ngwa eletriki eletriki dị elu, ngbanwe nke skru, mwepụ nke ndị na - agbanwe ihe, iwepu ọnọdụ dị iche iche, iwepu ọnya vinyl na-enweghị ihe mgbaze ma ọ bụ roba, mwepụ nke hoses na AC ịkwọ ụgbọ mmiri. , kpo oku na ịgbasa bearings Mpekere nke eriri ahụ na-eme ka ọ dị mfe ịwụnye, ajari, na nrụrụ ihe mkpofu, enwere ike iji ya na mgbasa nke ọrụ na akụrụngwa dị iche iche.
Igwe a abụghị sọsọ maka ụlọ ọrụ na-arụzi ụgbọala, ụlọ ahịa 4S, ụlọ ọrụ na-arụzi moto, ụlọ ọrụ eji arụ ọrụ, igwe nrụpụta, ọrụ akụrụngwa, ngalaba na-arụ otu, ngalaba nchekwa, ụlọ ahịa ngwaike, kamakwa maka bra bra ngwá ọrụ, brazing tool brazing. , Okpomọkụ nke obere akụkụ, obere ọla nke dị oké ọnụ ahịa (ọla edo, ọla ọcha, wdg) na-agbaze, obere ihe igwe anaghị agba nchara, wdg.
Aschụpụ nza dị iche iche nke boolu ịkpa ike.
Okpomọkụ ịgwọ nke ụgbọ ala corrosion bolts, mkpụrụ, gears, pulleys, pulleys, biarin.
Okpomoku nke ngwa ngwaike jiri igwe ihe di elu, dika vise, hama, igwe ndi nkpa.
Okpomoku kpochapu nke uzo di iche iche, ihe eji meputa aru.
Ugboro ugboro na - ekupu okpomoku okpukpo oku nke ihe eji eme ihe.
Gbasi ozu nke carbide huru okuko nwere ezé ukwu na ndi pere mpe.
Eku ọla ọcha, akụkụ akụkụ, ịgbado ụkwụ.
Industrylọ ọrụ eletriki: ezigbo wires, akụkụ elektrọnik dị iche iche, akụkụ dị mma, ọla ọcha na ire ere.
Lọ ọrụ maka igwe na nke eletriki: nkwonkwo ígwè dị mma, ọla nchara ọla kọpa, ọla na ihe ndị ọzọ.
Industrylọ ọrụ waya: eriri waya ntinye ntinye.
Industrylọ ọrụ egwuregwu ụmụaka: Clockwork mpempe akwụkwọ metal dị ọcha.
Wgbanye mma: mma mpempe akwụkwọ na akwa akpụkpọ ụkwụ na-ebelata.
Ngwunye osisi dị iche iche, dịka: anyụike, planer na ọgwụgwọ ọkụ ndị ọzọ
Ihe ndi eji eme mmiri dika plọg nke plọg penser, igwe nke igwe rotor, itughari akwara n’elu valves di iche iche, gia nke gia na ihe ndi ozo.
Okpomoku nke okpukpo oku na ugboala di elu n’iru igwe oku, dika: crankshaft, ijikọ mkpanaka, piston pin, camshaft, valvụ, mwepu dị iche iche na gearbox, ihe dị iche iche, ihe dị iche iche, na-ebufe oke ngbanye ọkụ na - akwụsị ịsa ahụ ọkụ, nke dị iche iche. obere ihe eji atụ afụ, ihe dị iche iche, ube rocker, wdg.
Enwere ike kpoo ngwaahịa a ka ọ dị ọkụ ruo ogo 800 n'otu oge, enweghị ọkụ a na-emeghe, ọ nweghị mmiri jụrụ oyi, yana ịwa ahụ dị mma.
Ọ bụrụ na emebighị ụma ma ọ bụ arụ ọrụ ya nke ọma, a na-ekwe nkwa ngwaahịa a maka afọ 1
Ike ọrụ Otu oge110v, 50Hz / 60Hz
Otu oge 220V, 50Hz / 60Hz
The nso nke na-arụ ọrụ voltaji 100V-120V
Mmepụta ike 1KW
Frequencygha ugboro ugboro 30-100KHZ
Mmepụta ugbu a 10A
Jụrụ Jụrụ Ikuku jụrụ oyi
Uzo nchebe okpomoku 85 ℃
Asambodo EC ， UL, CCC ， E Nwere maka COC, POVC
Ọrụ okirikiri 100%
Ngwa ndị ahụ bịara na Mini Induction heat.
Dia 30mm mkpuchi 2 iberibe
Dia 40mm mkpuchi 2 iberibe
Dia 50mm mkpuchi 2 iberibe
Ogologo 750mm USB maka eriri mkpuchi 2 iberibe
Cost maka ikpo oku Plate 2 iberibe
Ngalaba Brazing Induction
bracing igwe eji eme ihe